Yintoni kwaye ayikho into engekhoyo yokukholelwa kuThixo?
Isikhundla esingagqibekanga Isikhundla sokuba uThixo ukhona
Ukungabikho kokukholelwa kuThixo kukho naluphi na uhlobo lokholelwa kuThixo okanye olungenalo itism apho umntu engakholelwa kukho ubukho nawuphi na oothixo kodwa akayi kubanga ibango elifanelekileyo ukuba oothixo abayikho. Isimo sabo sengqondo sithi, "Andikholelwa ukuba kukho uThixo, kodwa andiyi kuyenza into yokuba akukho Thixo."
Ukungabikho kokukholelwa kuThixo kunokusondelelana ngokucacileyo ngokubanzi, ngokucacileyo ngokuthethelelwa kobukho bukaThixo kunye nemigangatho efanayo neyobukho bukaThixo, ubuthathaka obungakholelwa kuThixo , kunye nokukholelwa kuThixo.
Ukungabikho kokukholelwa kuThixo kungabonakala xa uthe wagxeka ingcamango yomntu ophakamileyo othandazelayo kwimicimbi yabantu kwaye awukholelwa ekubeni unkulunkulu ongenamntu ojongene nommandla wendalo yonke, kodwa ungatsho ukuba loo ngcamango iyinyani.
Ukungahloneli Ukukholelwa KuThixo Ukuthelekiswa no-Agnosticism
I-Agnostics ayifuni ukuya kunqanda inkolelo yokuba oothixo bangaba khona, ngelixa abantu abangakholelwa kuThixo bangenjalo. Ababi abangakholelwa kuThixo baye banquma ukuba abakholelwa ukuba oothixo babakho, ngelixa i-agnostics isesecingo. Kwintetho kunye nomkholi, i-agnostic ingathi, "andizange ndenze isigqibo sokuba ngaba unguThixo." Umntu ongakholelwa kuThixo uthi, "Andikholelwa kuThixo." Kuzo zombini ezi ziimeko, umthwalo wobubungqina bokuthi kukho uThixo ubeka kwi-believer. I-agnostic and atheists are the ones who need to convince and who do not have to prove their stance.
Ukungahloneli Ukukholelwa KuThixo kunye Nokungakholelwa KuThixo
Kwintetho kunye nomkholwa, umntu ongakholelwa kuThixo unokuthi, "Akukho thixo." Ukwahlukana kunokubonakala kubangqiqo, kodwa umntu ongakholelwa kuThixo akaxeleli ngokukodwa ukuba kukho ukukholelwa kwinthixo, ngelixa u-Thixo ongekholelwayo ubaxelela ukuba inkolelo enyana ayiyiphutha.
Kule meko, umakholwa unokufuna ukuba umntu ongakholelwa kuThixo ukhombise isikhundla sakhe sokuba akukho uThixo, kunokuba umthwalo wobungqina obukholweni.
Ukuphuhliswa kweengcamango zokungabikho kobuthixo
U-Anthony Flew, ngo-1976 "Ukwahlulelwa kobukholelwa kuThixo" kuphakanyiswa ukuba ukukholelwa kuThixo kwakungadingeki ukuba kubonakaliswe njengokuba kwakungekho uThixo, kodwa kunokuthi ungakholelwa kuThixo, okanye ungabi yintetho.
Wayebona ukukholelwa kuThixo njengento engagqibekanga. "Nangona namhlanje, intsingiselo eqhelekileyo yokuthi 'ukholelwa kuThixo' ngesiNgesi 'ngumntu obonisa ukuba akukho njengaye njengoThixo, ndifuna ukuba ilizwi lingaqondwa kakubi kodwa libi ... kule ngcaciso ingakholelwa kuThixo: akukho mntu ngokuqinisekileyo ubonisa ukungabi khona koThixo; kodwa umntu ongeyonto nje. " Isikhundla esingagqibekanga kuba umthwalo wobungqina bokuba khona kukaThixo kukukholwa.
UMichael Martin ungumbhali omnye oye wakhupha izichaso zokungakholelwa kuThixo. "Ukungabikho kokwenyaniso: Ulungelelwano lwefilosofi" ubhala esithi, "Ukungahloneli uThixo, isikhundla sokuba ungakholelwa kuThixo okhoyo ukhokho ... Ukukholelwa kuThixo: Isikhundla sokungakholelwa ukuba uThixo ukhokho ... Ngokucacileyo ukuba akukho Ukungakholelwa kuThixo: Umntu ongenakholelwa kuThixo ukholelwa ukuba akukho kholelwa kuThixo, kodwa akakhothi. "
Yintoni Ukuthanda Izinto Eziphathekayo? - Imbali kunye neNcazelo
UAdolf Hitler ebuKristwini: iiCotes
Indlela yokungena kwiCanoe ukusuka eManzini
Iindawo eziPhambili zokuLoba iiFly eCalifornia
Iinkcukacha ezichanekileyo kunye nezibalo ezingabonakaliyo
Ukusetyenziswa kweeMephu zeMathematika kwiJografi
1960-2000 Ama-Olympic Boxing Teams
Indlela yokuLawula i-Pizza kwi "Pizza al taglio" Ukuthenga e-Italy
Imimoya yoRhwebo, amaHhashi amaHlathi, kunye neengqungquthela
Udliwano-ndlebe: UScott Speedman Uthetha nge 'Underworld'